Ogaden News Agency (ONA) – Musliminta Itoobiya oy ka go’antahay in heeryada Meles ay iska dulqaadaan – Xaaji Maxamad
Musliminta Itoobiya oy ka go’antahay in heeryada Meles ay iska dulqaadaan – Xaaji Maxamad
Posted by ONA Admin	/ May 28, 2012
Maalintii Jimcaha ahayd ee 25.may 2012. Waxaa Magaalada Addis Abbaba ka dhacay Baananbixii ugu weyna ay isugu soo baxaan muslimiinta ku nool Addis abbaba iyo gobalad ku dhaw dhaw ee dalka Itoobiya. Kumanaan kun oo muslimiin ah ayaa iskugu soo baxay wadooyinka magaalda addiis Abbaba kuwaas oo ku dhawaaqayey; Allahu Akbar, Allahu Akabar.. Allahu Akbar..
Banaanbaxa shalay waxaa lagu xidhay wariye u shaqeeya Idaacada Mareykanka ee VOA’s Peter Heinlein , Wariyahan ayaa la qabtay isaga iyo turjubaankiisi oo doonayey in ay war ka soo gudbiyaan dadka banaanbaxayey ayaa ciidamada gumeysiga Itoobiya oo caadaystay in ay afka qabtaan cid kasta oo isku dayda in ay soo gudbiso cadaadiska lagu hayo dadka Itoobiya. Waxaan xasuusan labadii wariyee u dhashay dalkaSwedenoo doonayey in ay soo tabiyaan cadaadiska iyo cunaqabataynat ay Itoobiya ku hayso shacabka Soomaali Ogaadeeniya in sidaas oo kale loogu xidhay Itoobiya walina ay ku xidhanyihiin iyagoo maxkamad been abuur ah ay ku xukuntay 11 sano.
Musliminta Itoobiya oo ay ka go’aantahay in ay ka takhlusan Kalidii taliye Meles Zinawi, kadib markay mudo dheer cabshadooda ku muujinayeen si sharciga waafaqsan markay arkeen in uu kalidii taliye Meles dhag u dhigi waayey waxay diyar u yihiin in ay gacantooda ku difaacaan Diintood Islaamka ah ee Toosan.
Maahmaah Soomaaliyeed baa ahayd Geelow maalintaad Ciin daaqdo ayaa laguu yaaba. Mels muda dheer buu gumaad iyo dil ku soo hayey qoomiyadaha Itoobiya haddana wuxuu bilaabay isag oo adeegsanay koox diin khaldan wadatay oo sheeganaysa Muslimin in uu dartood u gumaado shacuubta musliminta ee ku nool Itoobiya taas oo ku noqon doonta tii uu ku dhiman lahaa ama xukun kiisa soo af-jari lahayd. Haddaba su’aasha isweydiinta mudan waxay tahay; maxay salka ku hayaan khilaafak diimeed ee Itoobiya ka aloosmay.
Waxay salka ku hayaan arriimo la xidhiidh Diinta Islamka gaar ahaan koox ama firqo la magac baxaday Al-Absha iyo Dawlada oo faragalin ku hayasa arimaha diinta. Dawlada Itoobiya waxay aad iskugu dhabar jabisay siday uga gadi lahayd muslimiinta Itobiya kooxdan Al-Abaash. Talabooyinka ay dawladu ku garab istaagtay ee muuqda waxa ka mid ah; Dilka dadka banaabaxaya iyo in la xidh xidho culumada ka soo horjeedsada oo qudbado ay ku diidanyihiin Al-ahbashna ka jeediyey masjidyo.
Haddab maxay yihiin Arrimahan Socda Itoobiya maxaase keenay in ay hadda soo ifbaxaan? Arrimahan socda waxaan u kala qaybinaynaa dhawr Arrimood.
Faragalinta Xuukmada Meles Zinawi.
Samayta ay Ummada Soomaaliyeed ku yeelan karto.
Jam’iyyat al-mashari al-khairiyya al-Islamiyya.(The Associtio of Islamic Pholanthropic Project)
Al-ahbash waa Koox ama firqo ka mid ah firqooyinka Diinta Islamka ka leexday. Kooxdan oo sheegata inay haystaan Diinta Islamka, Sunniyiina sheegta ayaa waxay xoog saraan sidii ay isugu dhawayn lahayeen Shiicada iyo Suniyiinta, iyagoo arima badan ku raacay shiicada sida in la caayo asaxaabtii iyo qaar ka mid ah Umahaatul Mu’miniin oo ah diin ka bax sida ku cad quraanka iyo axaadiithta rasuulka CS.
Al-Ahbash waxay ka aloosantay dalalka Lebnon iyo Suuriya, waxay xidhiidh dhaw iyo wada shaqaynba la leeyihiin xukumadaha Suuriya (Calawiyiinta) iyo Lebnon. Firqadan oo sida aan sheegnay ay aad isugu dhabr jabiya sidii la’iskugu soo dhawayn lahaa Shiicada iyo Suniyiinta, ayaa arrinkaas wuxuu kooxdan u sahlay in ay xidhiidh dhaw la yeeshaan dawladaIran.
Waxaa baryahn dambe soo baxdaysa oo la ogaaday in dhaqaalaha ugu badan iyo Mabaadiida ay ku hawlagalaan ay ka soo fulaanIraniyo madaxda Shiicada eeIran, Lebnon iyo Suriya.
Kooxdani waxay wadaan arrimo badan oo diin ka bax ah waana in si fiican ummada loogu sharaxaa khaldaadkooda loogana digaa.
Faragalinta Dawlada Itoobiya(xukumada meles).
Dalka Itoobiya waa dal ay ku noolyihiin qawmiyada kala duwan, ayna ku noolyihiin dad haysta diimo kale duwan sida Islamka, Kirsitanka iyo kuwa kale. Dawlada Itoobiya waxaa waligeed soo xukumi jirey Xukumado ka soo jeeda Qoomiyadaha haysta Diinta Masiixiga (Orthodox). Waxay xukuumadda EPRDF/TPLF markay qabsadeen xukunka ku dhawaaqeen inay diimaha u siman yihiin, hasa ahaatee sanadahan dambe waxay bilowday xukuumadda faragalin iyo xulufaysi dhinac diimaha ah. Waxaa baryahan soo baxaysa in ay aad uga cabsi qabto muslimiinta oo si fiican u baranaya diintooda, taasaana keentay inay soo dhawaysataan Al-Ahbash si Kooxdaa ay rabshado uga abuuraan muslimiinta Itoobiya dhexdooda. Muslimintii ku noolayd Itoobiya waxay dareemeen in daaqada laga soo galiyey diin ama firqo tashwiish lagu galinayo diintii saxiixa ahayd ee ay haysteen, waxay dareemeen in Kitaabkii iyo Sunnadii tashwiish iyo khalkhal in lagaliyo la doonayo, oo dawlada Melesna ay xaga dambe ka wado arinta iyadoo dhaqaale kaga raadsanaysa wadamo kale oo doonaya in Islaamka la kala jabiyo dagaal iyo dagaansho la’aana la dhex dhigo.
Faragalinta muuqata ee ilaa hadda ay dawlada Meles ku kacday waxaa ka mid ah.
Soo dhawayn aad u balaadhn oo dhinaca dhaqaalaha, dhul iyo siyaasadeed oo ay siiyeen Kooxdan.
Dil, xidhixidh,cadaadis iyo hanjabaad ay kula kacday dadkii Islaamka ah ee ka soo horjeestay Kooxdan.
Kal-qaybin iyo iska horkeen Muslimiintii iyo Majliskii ay samaysteen.
Ka caydhin Muwaadiniin Carab ah ama Culumo daaciyin ahaa oo horay u joogay Itoobiya, iyagoo ku eedeynaya inay faafinayaan madhab ka soo horjeeda midka Ahbaashta.
Caga juglayn iyo Hanjabaad joogta ah oo ay ku hayso Muslimiinta Itoobiya.
Saamaynta ay ku yeelan karto Ummada Soomaaliyeed.
Ummadda Soomaaliyeed waa ummad 100% Muslim ah waligeedna lagama leexini dariiqa saxda ah ee ay u gutaan wajibaadkooda Dineed. Kooxdan ama Firqadan Al-Ahbash waa koox khatar ku ah Shacabka Soomaaliyeed iyo Guud ahaan Muslimiinta Aduunka ku nool, oo hadaf laga leeyahay, kumana ekaan doonaan Itoobiya ee meelo badan oo Geeska Afrika ah ayey gaadhi doonan haddii aan la iska qaban kooxdan diinta khaldan wadata. Waxay abuuri doonan khalkhal iyo tashwiish diimeed oo raad xun reebi kara. Alaahu manajinaa…
Haya’dan waxaa la asaasay sanadhii 1980, waxaana asaasay Sh. Abdalla Al-harari. Haya’dan oo Ujeedo badan lahayd waxaa maalgalisay dawlada Suuriya, Lebnaan, Yuhuuda iyoIranoo hadda faraha kula jirta. Haya’dani sanadihii 80yadii ee dagaalka sokeeya ka dilaacay Lebnaan waxay ka qayb qaadatay arrimo samofal, dhaqaale aad u badana waxay kaga heshay wadamo badan oo Carab ah iyo aduunka intiisa kale, Waxay leedahay Xafiisyo badan oo ku yaala Aduunka gaar ahaan Siiriya , Lebnaan iyoIran. Waxaay hadda Schoolo ka furta AddisAbba iyo meelo kale oo Itoobiya ka mid ah.